विप्लव नेकपाका कमाण्डर एलएमजी र एम १६ हतियारसहित समातिए – समावेशी
विप्लव नेकपाका कमाण्डर एलएमजी र एम १६ हतियारसहित समातिए
बुधबार, फाल्गुण २२, २०७५ | २०:१४:०५ |
काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयमा माओवादीले सेना, प्रहरीबाट लुटेका र भारतबाट ल्याएका सबै हतियार राज्यको कोतमा दाखिला भएका छैनन् भनेर चर्चा भइरहँदा लगत्तै एउटा हतियार फेला परेको छ, विप्लव नेकपाका नेताबाट, धरानमा । वडा नं ६ पानवारीबाट विप्लव नेकपाका कोशी व्यूरो सदस्य देवकुमार लिम्बू एलएमजी र एम १६ जस्ता हतियारसहित समातिएका छन् । प्रहरी नजिक आएको देखेसँगै तीव्र गतिमा मोटरसाइकल कुदाएर भागेको समूहलाई पछ्याउँदै जाँदा अरु भागे पनि उनी अँठ्याइएका हुन् । करिव डेढ किलोमीटर पूर्व बूढी खोलाको बगरमा प्रहरीले घेरा हालेर उनलाई समातेको थियो । उनीबाट बरामद भएको हतियार राम्रोसँग प्याक गरिएको, चालु हालतको थियो ।
लाइट मेशिनगन एक व्यक्तिले एक्लै बोकेर हिँड्ने खाले हतियार होइन । एक सेक्शनमा बोकिने गु्रप वेपन हो । एम १६ र एसएलआर भने एकैजनाले लिएर हिँड्न सक्छ । ११ जनाको एउटा सेक्सन हुने सैनिक फर्मेसनमा मात्र लिएर हिँड्न सकिन्छ, एलएमजी । प्रश्न के उठ्छ भने, सुरक्षित ठाउँमा राखिएको हतियार किन ठाउँसारी गर्न लागियो ? त्यो हतियारको फायर पावर राम्रो हुन्छ । पक्राउ परेका देवले आफू राजनीतिक कमिसारमात्र भएको भनेका छन् । प्रश्न के हो भने, कमिसारले त्यत्रो हतियार बोकेर किन हिँडे ? कतै ठूलै तालिम त सञ्चालन भइरहेको छैन ? शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथ कहिले आगोमा डढ्यो, कहिले खोलाले बगायोजस्ता कुरा भनिए । यसअघि तेस्रो डिभिजनका कमाण्डर कालिबहादुर खाम (विविध) को टोलीबाट यार्चागुम्बासहित राजधानीमै एम १६ फेला परेको थियो ।
नेपालको अप्ठेरो कस्तो भने, केही दिनमै भारतमा आमचुनाव हुँदै छ । यही बेला पाकिस्तान र भारतबीच युद्धको स्थिति छ । यस्तो बेला भारतीय चुनावलाई असर गर्न यता बसेर उता हान्ने खतरा हुन्छ । हाम्रो सुरक्षा स्थिति कस्तो भद्धा छ भने, सेन्ट्रल जेलमा बसेका युनुस अन्सारीलाई भारतीय सुटर मनमीत सिंह गोली हान्न गेटैमा पुग्छन् । यस्तो स्थितिमा आतंकवादी गतिविधिमा नेपाली भूमि प्रयोग हुनसक्छ । त्यसमाथि यो मार्च महिना एकदमै खतरनाक छ । तिब्बतसँग जोडेर दलाई लामाका मान्छेले बितण्डा मच्चाउन सक्ने महिना हो यो । दुई देशबीचको समस्यामा नेपाल स्याडवीच बन्ने खतरा पनि उत्तिकै विद्यमान छ ।
अहिले विप्लव नेकपा वा कुनै आतंककारी समूहका मान्छेलाई समातेर पनि कुन मुद्दा लगाउने ? अन्यौलता छँदैछ । कि, प्रकाण्डलाई झैँ समातेर जिल्ला–जिल्ला घुमाउँदै राख्नुप¥यो । होइन भने नेपालमा त्यससम्बन्धी गतिलो कानुनको अभाव छ । त्यसमाथि विप्लव समूहले एनसेलका टावर हान्न थालेको छ । त्यस्ता टावर प्रायः पहाडी टाकुरामा हुन्छन् । त्यसमा प्रहरीलाई सुरक्षार्थ खटाउने कि सेनालाई ? यस्ता अनेक सुरक्षा जटिलता छन् ।जनआस्थाबाट